Ukomelela kwesivumelwano, i-XCMG iqela lokujikeleza lomatshini weqela elijikeleze emazantsi!
Ixesha Post: 08-17-2021
Le projekthi ilunge ngokwenene kwimpilo yabantu. Inani leeprojekthi zesiseko semfumba ngama-3,600, kunye neepali zobubanzi zii-600mm, 800mm, kunye ne-900mm. Ubunzulu bemfumba obuphakathi yi-25m, kwaye umthamo wolwakhiwo mkhulu. Nangona kunjalo, ifomathi yomhlaba ye-karst ihlala ibeka ingozi ...Funda ngokugqithisileyo »
I-XCMG ikhuthaza "ukwandiswa" kwamandla obushushu kunye neenzame "zekhabhoni ezimbini"!
Ixesha Post: 08-02-2021
Ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, i "3060 ″ ekujoliswe kuyo iphindaphindwe ukukhankanywa, kwaye" ikharbhon ezimbini "ekujoliswe kuko kuphuculwe kwisicwangciso-qhinga sesizwe. Yonke imimandla izabalazela ukuba yintsika yenguqu yamandla kunye nokukhawulezisa uhlengahlengiso lwamandla ...Funda ngokugqithisileyo »
XZ6600 HDD Beijing-Hangzhou Grand Canal ukuwela
Ixesha Post: 07-15-2021
XCMG oxwesileyo zemiyalelo zokomba XZ6600 ukuwela Beijing-Hangzhou Canal projekthi ukunceda ukuhlanganiswa unikezelo lwamanzi e Pizhou City. Ngokuwela i-XCMG ethe tyaba yomkhombe wokugrumba isixhobo, iindawo ezisemantla nezisezantsi zomjelo zinxibelelene nokuqinisekisa ukhuseleko lwamanzi ...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha Post: 06-10-2021
Ukumba amandla kunceda ukungathathi cala kwikhabhoni Kwiminyaka yakutshanje, ekuphenduleni kumgaqo-nkqubo wesizwe wophuhliso lwamandla kunye nokukhuthaza uphuhliso kunye nokusetyenziswa kwamandla ombane welizwe lam, i-XCMG Foundation isungule kwangaphambili kwicandelo lokomba umbane kunye nemveliso. IXCMG ...Funda ngokugqithisileyo »
Iprojekthi yombhobho wegesi ye-China i-East China iqala ukusuka kumda wase-Sino Russian kwisiXeko sase-Heihe, kwiPhondo lase-Heilongjiang.
Ixesha Post: 06-01-2021
Iprojekthi yePayipi yeNdawo ye-Sino-Russian East Route iqala kumda we-Sino-Russian kwiSixeko sase-Heihe, kwiPhondo lase-Heilongjiang kwaye iphele eShanghai. Ziikhilomitha ezingama-5,111 ubude. Yahlulwe yangamacandelo amathathu okuvunywa nokwakhiwa ngezigaba. Phakathi kwabo, icandelo lasemantla kunye t ...Funda ngokugqithisileyo »
Sihlala sikhusela le "mile yokugqibela"!
Ixesha Post: 05-10-2021
E-Indonesia, ilizwe elaziwa njenge "lizwe elinamawaka alishumi eziqithi", i-XCMG yokubhola ukujikeleza, ii-rigs ezithe tyaba zokomba kunye nezinye iimveliso zinesabelo sentengiso esiphezulu kwimarike yalapha, kodwa zichithakele kwiziqithi eziphantse zili-10. Iindawo zokwakha zangaphandle ...Funda ngokugqithisileyo »
imfumba yokomba isixhobo, Umatshini wokugrumba amaqula, Umatshini wokugoba amanzi amancinci, Umatshini weDth Rig,